php nuke ဆိုတာ... — MYSTERY ZILLION
php nuke ဆိုတာ...
ကျွန်တော်ဆီမှာ php nuke လုပ်တဲ့ software တော်တော်များရှိပါတယ်....ဒါပေမယ့်ဘယ်လို
PHP Nuke ဆိုတာ CMS ဟုတ်ဘူးလား ???? software ဆိုတာ ဘာတွေလဲမသိဘူး...
php nuke ဆိုတာကို CMS တစ်ခုအနေနဲ့တော့ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့တာကို လုပ်တဲ့ software ဆိုတာကိုတော့ သိပ်မသိဘူးဗျ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲ့ဒီ software နာမည်တွေကိုပါ ပြောပြပါလား။ သိတဲ့လူတွေက ရှင်းပြလို့ရတာပေါ့။
ဟုတ်ကျွန်တော်ပြောတာ hacking tools ထဲက software ပါကိုစေတန်...\_:D/\_:D/
ကိုစေတန်ရေကျွန်တော်ပြောတဲ့ software ကိုshare လိုက်ပါပြီ....လိုခြင်သူများယူကြကုန်လော့...
အဲဒီ tools တွေသုံးနေရင်တော့ script kiddie တောင်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး
click kiddie ပဲဖြစ်လိမ့်မယ်:P
ကိုယ်တိုင် exploit ရေးတတ်ဖို့တော့ တော်တော်လိုသေးတယ်။
In online gaming, nuking is used by spamming another user, or all other users, with random repeated messages in quick succession. Such techniques are also seen in instant messaging programs as repeatedly sending text can be assigned toamacro or AppleScript. Modern operating systems are usually resistant to these nuke attacks, and online games now have third party "Flood control."